Maxaa kusoo kordhay Dagaal ka dhacay Xeraale? – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Maxaa kusoo kordhay Dagaal ka dhacay Xeraale?
Maxaa kusoo kordhay Dagaal ka dhacay Xeraale?
Waxaa saakay xaalad deganaansho ah laga dareemayaa deegaanka Xeraale ee Gobolka Galgaduud halkaas oo shalay dagaal culus uu ku dhexmaray Maleeshiyaad gacanta ku haayo deegaankaas iyo Ciidamadii Ahlusuna ee ku biiray Maamulka Galmudug.
Dagaalka ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen in ka badan 40 ruux tiro kalena ay ku dhaawacmeen oo isugu jira dad Shacab ah iyo laba dhinac ee wada dagaalamay, iyada oo dagaalka si iskiis ah uu u istaagay.
Maanta ayaa la xaqiijiyey in xaaladu ay tahay mid degan, hayeeshee weli ay cabsi ka jirto Magalada maadaama ay dhinacyadii dagaalamay weli ishor-fadhiyaan,waxaana dadka badi ay ka barakaceen deegaanka Xeraale ee Gobolka Galgaduud.
Maamulka degaanka Xeraale ayaa sheegay in deegaanka ay soo weerareen ciidamo ka tirsan kuwa Galmudug wallow dhinaca Galmudug ee Dhuumsareeb ay beeniyeen warka kasoo baxay Maamulka deegaanka Xeraale.
Dagaalka deegaanka Xeraale ee gobolka Galgaduud ayaa ah mid soo laab laabtay,waxaana ilaa iyo hadda mas’uuliyiinta ugu sareysa Maamulka Galmudug kama hadlin dagaalka khasaaraha badan dhaliyey ee ka dhacay deegaanka Xeraale ee Gobolka Galgaduud.
Previous articleNin 60-jir ah oo kufsaday 4-Hablood oo Walaalo iyo Aabbaha Dhalay oo ka hadlay!!
Next articleXasan Sheikh iyo Sheikh Shariif oo si adag uga hadlay dagaalada ka socdo Galmudug iyo Hirshabeelle
mudaharaadyo maalintii sadexaad ka socda wolaita Itoobiya
Kenya oo sheegtey dardargelinaysa danaha Afrika ee madasha UN-ka